ထီဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့အ ရာရှိများသည် သူမထီပေါက်ပြီး ရက်သတ္တနှစ်ပတ်ကြာမှသာ သူမထံသို့ ထီပေါက်ကြောင်းအကြောင်း ကြားခဲ့သည်ဟုလည်း အေပီသတင်း ဌာနကဖော်ပြလိုက်သည်။ သူမသည် ထီဆုငွေဒေါ်လာ ၆၈၈ သန်းအား အတူပေါက်သူ နယူးယောက်မြို့သားတစ်ဦးနှင့် အတူ ခွဲဝေယူရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းထီလက် မှတ်အား Casey’s စတိုးဆိုင်မှ ဝယ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဂျပန်တွင် သူနာပြုအလုပ် ရမည်ဟုဆိုကာ ငွေကြေး လိမ်လည်သော ဂျပန်စာသင်ကျောင်း တစ်ကျောင်းကို အမှု??
ပို့ကုန် ရငွေပြန်လည် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက် ကုမ္ပဏီပေါင်း ၉၃ခု ကျန်ရှိ၊ ဇွန် ၅ ရက်အထိ ပြန်မသွ?
ဘရပ်ဆဲလ်မြို့တွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် လူ ၇ဝဝဝဝ ခန့် ဆန္ဒပြ